FAQs - Baasaboorka
Ma bixin karaa lacag kaash ah marka la soo gudbiyo? / Waxaan awoodi karaa inaan lacagta kuugu shubo sababtoo ah ma haysto kaarka deynta.
Paypal waxay bixisaa ilaalinta alaab-qeybiyaha iyo waxay adeegsanaysaa macaamiisha iyagoo bixinaya nidaam albaabbada ammaan ah iyo nidaam lacag celin ah. Tani waa sababta aan udoonayno isticmaalka Paypal si aan u dhameystirno macaamilkaaga halkan si ammaan ah iyada oo aan khatarta kaararka deynta ah.
Ka waran haddii aanan haysanin biilka Paypal ?!
Don't worry as you do not need to own a PayPal account to pay: you may enter your credit card's data directly at PayPal and complete your payment. You uma baahnid inaad iska diiwaangeliso xisaabta PayPal mana ahan.
1) U hubso "BIXINTA LACAGEED AMA QIIMEYSIGA" OPTION IS LOOGU TALAGALAY
2. GELI KARTAA CODSADA CARD
Cinwaanka, emailka iyo nambarka telefoonka ayaa sidoo kale laga codsan karaa iyadoo ku xiran waddankaaga.
Markaad samayso, guji "Dib u eegis iyo sii wad".
3. DIB U QAADASHO "MAXAA QAADO"
4. FADLAN "MAYA, SHAQAALAHA" MARKA AAD KA HELI KARTAA XIDHIIDDA LACAGTA WARBIXIN KU SAABSAN!
DONE! WAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD SHEEGTAY IN LAGU QAADO WARBIXIN KU SAABSAN EMAIL LAGU QAADO GARGAARKAAGA! DADKA SHAQADA
Siyaasadeena dib u noqoshadu waxay socotaa 30 maalmood laga bilaabo taariikhda aad hesho alaabta (IE ayaa ka saxiixa adeegga boostadaada). Haddii maalmaha 30 ay soo mareen tan, nasiib daro maaha inaan kuu soo celino lacag celin ama is dhaafsi.
Haddii qaladku nagu soo galo (isku dhafan, khaladka imaanshada), waxaan dabooli doonaa kharashka biilka :)
Si aad xaq ugu yeelato soo noqoshada, sheygaaga waa in aan la isticmaalin oo xaalad la mid ah oo aad heshay. Waa inay sidoo kale ku jirtaa baakidhka asalka ah.Si aad u buuxiso soo celinta, waxaan u baahannahay risiit ama caddayn ah iibsashada. Please do not send your purchase back to the manufacturer. Fadlan xusuuso in khidmadaha boostada lagu soo celiyo aysan dabooli doonin. Waxaanu kugula talineynaa inaad u dirto kooxda taageeradayada wixii faahfaahin buuxda ah.
Si Amar Lagu Soo Celiyo, fadlan nala soo xiriir adoo isticmaalaya foomka xiriirka ee boggayaga
Markaad iibsato amarkaaga, waxaad yeelan doontaa saacado 24 si aad u joojiso amarkaaga. Waxaan bixin doonaa lacag buuxda haddii aad joojiso amarkaaga saacadaha 24. Si kastaba ha noqotee haddii saacadaha 24 ay soo mareen tan iyo markii aad amartay amarka, waa inaad sugto qaybtaada si aad u timaadid ka hor intaadan nagu soo celin.
Haddii laguu ogolaado, markaa lacagta laguu soo celinayo waa la baari doonaa, iyo deynta si toos ah ayaa loo isticmaali doonaa kaarka deynta ama habka asalka ah ee lacag bixinta, maalmo cayiman oo ku xidhan ganacsigaaga lacagta.
LAYN AMA WAKHTIGA LACAGEED
S- Koodhka boostada waa qasab ah inuu dalbado amar laakiin ma haysto waddankayga. Sideen u dalban karaa amar?
SIDEE AYAAD SIDA SI AAD U SII JOOJIYEY BARNAAMIJKA?
SIDEE LOOGU SOO BANDHIGAA?
Amarka Maraykanku waxaa lagu soo wareejin doonaa USPS iyo amarro caalami ah oo la soo diri doono iyada oo ku xidhan xarunta fulinta ee alaabtu ay ka timid.
Wakhtiga gaadiidka caadiga ah waxaa lagu helaa toddobaadka 3.
WAXAAN U SIIN KARAA LAMBAR AADAN?
Wax walba oo sheyga ah ayaa laga soo saari karaa xarumo kala duwan oo lagu fuliyo caalamka iyada oo kooxdayada cilmi-baarista alaabadu ay waqti u isticmaashaan alaabooyinka tayo sare leh ee la awoodi karo. Inkastoo aanan awoodin inaan bixinno raadinta alaabadaada, shirkaddayadu waxay si buuxda ugu xirmaysaa baakooyinka iyo wixii alaab ah oo maqan ayaa laguu soo diri doonaa lacag la'aan.
MAXAA LOO ISTICMAALAYO KA QABO?
Adeegga gawaarida dhabta ahi waxay ku xiran yihiin xarunteena fulinta. Tani waa sababta oo ah alaabtayada waxaa laga helaa dalal kala duwan si loo hubiyo inaad hesho qiimaha ugu fiican. Adeegyada Courier way kala duwan yihiin waddanka oo dhan. Haddii aan lahayn ganacsi xoog leh oo adeegga gawaarida ah aan awoodno inaanu helno qiimo jaban markaa marka la eego xawaaraha waxaan lumin doonaa suuqyada caalamiga ah sida Amazon iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, waanu wadi doonnaa in aad hesho xirmooyinkaaga oo aad caymis ka bixisid khariidaddaada haddii ay dhacdo in maqan yahay ama lumo
WAXA AMA BADAN KARAA XANUM DHAMAAN, WAXAAN ILAAHAY KELAA KALIYA, WAA MAXAY?
MIDOW ILAALINTA HESHIISKA AMA LACAG LA'AANTA CUNTADA?
Qiimaha lagu soo bandhigay rasiidhadaada WAQTIGA ha ka duwo waxa aad amartay laakiin fadlan ha ka welwelin! Caadi ahaan waxa xarunteena fulinta samayn lahayd waa in la calaamadiyo qiimo aad u hooseeya ama calaamadee alaabta sida hadiyado ah. Tani waa inaad ka hortagto canshuuraha / khidadaha soo dejinta caadooyinka ah ee lagu soo rogay dhammaadkaada iyadoo wadamada qaar ka mid ah qarashyada dheeraadka ah ay yihiin kuwo aad u qaali ah.
WAXAA WAX SI LOO HELI KARAA AMA LAGA BILAABAYNAYO EE AQOON EE SHARCI ... WAA MAXAY LOOGU TALAGALAY?
WAA MAXAY HADDII AAN LAHAYN KA HELI KARAA?
Qof kasta oo guriga jooga wuxuu heli karaa xirmada isagoo wakiil ka ah macaamiisha. Badanaa xaashiyaha wuxuu ka tagi doonaa warqadda ururinta haddii qofna uusan joogin guriga waxaadna ka qaadan kartaa xaafaddaada xafiiska boostada ee kuugu dhow.
Waxaan rabaa inaan bedelo amar / calaamad, Miyaan ahay?
WAXAAN SU'AASHA LAGA HELAYO SUBAND AMA AMA TIXRAACKA AAD HA AADANAN HALKAN KA HELI KARAA, SIDEE AYAAD KA HELI KARTAA?